Dowladda KMG ah oo maanta Garoonka Diyaaradaha ka duulisay Dhaawaca Xildhibaan Mowliid Macaani iyo sarkaal ka tirsan dowladda KMG ah. | Anti-Tribalism
← Danjire Maxamed Cusman oo khudbad ka jeediyay Shirweynaha Isbahaysiga Ururadda soomaaliyeed ee sweden
Kulan Baroordiiq ah oo ka dhacay caasimada Sweden Stockholm oo loo sameeyay Aadan Wiish iyo Saciid Mugaanbe →
Dowladda KMG ah oo maanta Garoonka Diyaaradaha ka duulisay Dhaawaca Xildhibaan Mowliid Macaani iyo sarkaal ka tirsan dowladda KMG ah.
7-April-2012 (MMG) – Mowliid Macaani oo dhaawac halis ah uu ka soo gaaray qaraxii ismiidaaminta ahaa ee dhawaan ka dhacay xarunta Murtida iyo madadaalada ayaa maanta loo qaaday dalka dibadiisa si loogu soo daweeyo.
Qaaditaanka Xildhibaanka iyo sarkaal ka tirsan xafiiska R/wasaaraha xukuumadda KMG Soomaaliya ee dhaawacooda maanta la qaaday ayaa ka danbeeysay kadib markii xukuumadda KMG ah ay ku dhawaaqday in dadkii ku dhaawacmay qaraxii saddex maalin ka hor ka dhacay Tiyaatarka lagu soo daaweynayo dalka dibadiisa.
“Dhaawacyada waa kala duwanaayeen, waxaa ugu xumaa Feysal Xaaji Cilmi oo saakay la qaaday, iyo Mowliid Macaan oo hada la qaaday, inta kale waa jajab, qaarkood waa iska daran yihiin”ayuu yiri Dr. C/casiis Sheekh Yuusuf.
Dr. C/casiis Sheekh Yuusuf oo ah Wasiirka Caafimaadka ayaa sheegay in dhaawacyada la qaaday ay yihiin labo ruux oo ahaa kuwii ugu darnaa.